क्रिसमस को लागी कला दिन विचारहरु क्रिएटिव अनलाइन
क्रिसमस को लागी कला दिन विचारहरु
जुडित मर्सिया | | प्रेरणा
प्रत्येक क्रिसमसमा हामीसँग कसलाई दिने व्यक्तिहरूको सूची हुन्छ, र त्यो होaदिवालियापन de cabeza। उपभोक्तावादले हामीलाई वर्षभरि खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्छ र हाल, हामीसँग छ de गर्नु पर्ने। एक राम्रो विचार हो कला दिनुहोस्.
मसँग के उपहार छैन? म कसरी मूल हुन सक्छु? यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने उपहार फरक, र तपाईं एक संग आश्चर्य गर्न चाहनुहुन्छ उपहार रचनात्मक हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईलाई कला दिनुहोस्। दिनुहोस् कला? यो गाह्रो लाग्दछ, तर हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछौं कि यस क्रिसमसको लागि संस्कृति र कलाको प्रबर्धन गर्न विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला छ।
1 रचनात्मक दिमागका लागि उपहार
2 पेपर ट्राफी पत्ता लगाउनुहोस्
3 एक्वा नोटहरू
4 कला प्रदर्शनीहरु को लागी टिकटहरु
5 कस्टम आर्टवर्क
6 कलाकृति पानाहरू
रचनात्मक दिमागका लागि उपहार
यदि हाम्रो उपहारaलाई सम्बोधन गरिएको छ रचनात्मक व्यक्तिएक कला प्रेमीको रूपमा, उसको पेशाले उहाँलाई रचनात्मक रूपमा एक सार्वजनिक, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफीको रूपमा सक्रिय बनाउँछ, निराश नहुनुहोस् किनभने त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। आश्चर्यचकित हुनुहोस्। त्यहाँ साँच्चै अनौंठो र रचनात्मक विकल्पहरू छन् जुन तपाईंले प्रेम गर्नुहुनेछ।
हामी निश्चय छौं कि हामीले तपाईंको लागि तयारीहरू राख्नु भएको विचारहरू हेरे पछि तपाईंले पनि तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। नोट लिनुहोस्!
खोज्नुहोस् पेपर ट्राफी
पेपरथ्रोफी यो एक छ जर्मन ब्राण्ड पुन: निर्माण गर्न समर्पित जनावरको टाउको जुन ट्रफीको रूपमा झुण्डिएको छ, तर यस अवस्थामा यससँग मिलाइएको छ कागज। यी जीवनको आकारका कागज मूर्तिकलाहरू हुन्, साथै सामाजिक दावी, यसको सामग्री पूर्ण पारिस्थितिक छ किनकि यो FSC द्वारा प्रमाणित भएको रूपमा वातावरण मैत्री। एफएससी एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले वातावरणको हेरचाह गर्दछ र कम्पनीहरूलाई मान्यता दिन्छ जुन ईकोलोजिकल प्यारामिटरहरूसँग अनुपालन गर्दछ।
यस ब्रान्डको निर्माता घर मा एक उपयुक्त डिजाइन खोज्न को लागी र प्रत्येक दिन यसलाई हेर्न सक्षम हुन को लागी र थकित छैन। म पनि सन्तुलन खोज्न र आधुनिक डिजाइन बनाउन चाहान्छु। यो अवस्था मा, न्यूनतम घन आकारहरू तिनीहरूले आफ्नो सबै उद्देश्य हासिल गर्छन्। लालित्य विकिरण गर्दा तिनीहरू सरलता प्रतिनिधित्व गर्दछ।
को डिजाइन पशुको टाउको को हुन्, भित्तामा झुण्डिएका ट्राफिजहरू द्वारा; र स्थायी तथ्या .्क तिनीहरू बर्लिन, जर्मनी र मा डिजाइन गरिएको छ मेशिन काट्नुहोस् र पर्यावरण अनुकूल कागजबाट प्रि-फोल्ड गरियो उच्च गुणस्तर। यो नोट गर्नु पर्दछ कि प्रत्येक कागजपत्रहरू एक एक गरेर जाँच्दछन्, म्यानुअल रूपमा केवल यो सुनिश्चित गर्न कि केवल मोडेलहरू पूर्ण रूपमा काटिएको र फोल्ड गरिएको छ। जब तिनीहरूले यो पारित नियन्त्रण, que आधिकारिक रूपमा छाप Papertrophy द्वारा।
प्रेरणाले तपाईंलाई गार्डबाट पक्रन नदिनुहोस्! यो उपहार हो विस्तार धेरै हास्यास्पद कि तपाइँ रचनात्मक मानिसहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। यो एक हो वाटरप्रूफ नोटबुक तिनीहरूमा लेख्न र तिनीहरूलाई खराब गर्न सक्षम हुन। पानीमा डुब्दा कागज पग्लँदैन। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको उनीहरूलाई पेन, पेन्सिल वा स्थायी मार्कर को आवश्यकता छ।
कला प्रदर्शनीहरु को लागी टिकटहरु
हामी थियेटर वा सबै प्रकारको कार्यक्रमहरूमा जान टिकटहरू दिन धेरै प्रयोग गर्दै आएका छौं। अर्कोतर्फ, थोरै व्यक्तिले टिकट दिन्छन् कला प्रदर्शनी, संग्रहालय वा डिजाइन घटनाहरू। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई आफ्नो शहर वा वरपर हेर्नुहोस् तपाईं त्यहाँ सबै प्रस्ताव द्वारा आश्चर्यचकित हुनेछ!
यदि तपाईं ठुलो शहरमा बस्नुहुन्छ भने, यी प्रकारका गतिविधिहरू पाउन सजिलो हुन्छ। त्यहाँ म्याड्रिड, बार्सिलोना र सेभिलमा धेरै रोचक ठाउँ अवस्थित छ। त्यसको बारेमा Caixaforum। यो ला Caixa को सामाजिक कार्य हो जुन एक महान विविधताको प्रस्तावको लागि समर्पित छ प्रदर्शन, कुराकानी र पारिवारिक गतिविधिहरू।
तपाईं ठेठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम वेबसाइटहरु कोमो टिक्केटीआ, जसमा यो छ एक कला खण्ड र तपाइँ पक्कै रोचक केहि पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन फुर्सत गाइड, एक चोटि हेर्नुहोस् किनकि यो छ प्रस्ताव सबै शहरहरु को लागी España.
के तपाईंले दृष्टान्तहरू दिनेबारे सोच्नुभएको छ? पक्कै पनि तपाईले कहिल्यै अरु केहि व्यक्तिगत गर्न चाहानुहुन्छ र एउटा सुन्दर फोटो फ्रेममा फोटो खिचेको छ। अगाडि जानुहोस्, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं एक अर्डर गर्नुहोस् अनुकूलन चित्रण। छविमा हामी @hey_yuddies द्वारा अनुकूलित चित्रण देख्न सक्छौं।
त्यहाँ धेरै छन् बिभिन्न शैलीहरू र तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व वा तपाईले दिन चाहानु भएको व्यक्तिसँग फिट भएको एउटा भेट्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, हामी एक अर्को शैली छनौट गर्न सक्छौं यथार्थवादी अर्कोतर्फ, शिशु। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खोजलाई बजेटमा संकुचित गर्नुहोस् तपाईले लगानी गर्ने योजना गर्नुभयो। तपाईं एक बनाउन सक्नुहुन्छ caricature, जुन एक हास्य र quirky शैली, वा एक अधिक शैली नजिक छ यथार्थवादी.
यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने कहाँ सुरु गर्ने सर्च, हामी तपाईंलाई केही प्रोफाइलहरू छोडछौं इन्स्टाग्राम जो यस प्रकारको गर्न समर्पित छन् अर्डर:
छ सँगै यथार्थवादी शैली समतल डिजाइन, एक जवान केटी, कड़ी मेहनती र आफ्नो पेशे को बारे मा उत्साहित छ। यदि तपाईं उनको काम हेर्न चाहनुहुन्छ भने, हिचकिचाउनु हुँदैन आफ्नो इंस्टाग्राम प्रोफाइलमा जानुहोस्: hey_yuddies
अघिल्लो भन्दा बिल्कुलै फरक शैली @illustrationmaryf
यदि तपाईं नजिक शैली खोज्दै हुनुहुन्छ भने रेखाचित्र, यो केटीको शैली छ जुन हामीलाई मंगाबाट केहि सम्झाउन सक्छ। उनको नाम योलान्डा वर्ष हो र तपाईं उसलाई इन्स्टाग्राममा फेला पार्न सक्नुहुन्छ lolan_
को सहयोगमा पानीका रंगहरू र डिजिटल उपकरणहरू, @ lidiacantos.illustration साँच्चै राम्रो पानाहरू दिनुहुन्छ। उनको इन्स्टाग्राम प्रोफाइलको भ्रमण गर्नुहोस् र उनको बारेमा धेरै जान्नुहोस्।
अर्को धेरै वैध विकल्प हो एक इलस्ट्रेटर खोज्नुहोस् र उसलाई एउटा किन्नुहोस् फ्रेमन फिल्म। वर्तमानमा, इन्टरनेटले हामीलाई धेरै वेबसाइटहरू फेला पार्न मद्दत पुर्‍याउँछ जहाँ हामी चित्रकारहरू र प्रिन्टहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कलाकारबाट खरिद गर्न सक्दछौं, बिचौलिया बिना। यो प्रत्येक कलाकारको हुनु बढि सामान्य छ अनलाइन स्टोरयद्यपि त्यहाँ छन् इकमर्स त्यो कलाकारलाई मद्दत गर्दछ दृश्यता प्राप्त गर्नुहोस्.
ओलआर्टयो एक छ पोर्टल तीन व्यक्तिहरू द्वारा संचालित: सर्जियो, ब्याप्टिस्ट र राकेल। यी विपणन पेशेवरहरू हुन् जसले एक कलात्मक प्रोजेक्ट, उनीहरूको जुनसाहरूको एक प्रमोट गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले युवा स्प्यानिश उद्यमीहरूलाई समर्थन गर्छन्, हाल कुल छ १ artists कलाकारहरू जो उनीहरूसँग सहयोग गर्दछ।
ओह Là L'art, एक अनलाइन आर्ट गैलरी हो। यो बार्सिलोनाका दुई उद्यमीहरू द्वारा सिर्जना गरिएको थियो जसले कला मन पराउँछन्। तिनीहरू उदय कलाकारहरूलाई छान्ने र प्रचार गर्नको लागि समर्पित छन्। तिनीहरूको फेसबुक को माध्यम बाट तपाईं तिनीहरूको समाचार पनी नयाँ कलाकारहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
केही रचनात्मक एजेन्सीहरूको आफ्नै अनलाइन स्टोर छ जहाँ तपाईं विभिन्न कला वस्तुहरू किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा केस त्यो हो हे स्टुडियो। यो एक हो रचनात्मक अध्ययन बार्सिलोना मा प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय। तिनीहरू ग्राफिक डिजाइन र चित्रण परियोजनाहरु मा विशेषज्ञ छन्।
जसले कला दिन्छ उसले संस्कृति दिइरहन्छ। तिनीहरू थप मूल्यको साथ टुक्रा हुन् जसले धेरै भावनाहरू, अवधारणा र कथाहरू दिन्छन्। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँ बिभिन्न प्रविधिहरूको कला फेला पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो, को प्रयोग रंग, ला चित्रण, ला सेरीग्राफी वा मुद्रण, अन्य।
भ्रमण गर्नुहोस् बजार वा निष्पक्ष हामीलाई बिभिन्न उपहारहरू फेला पार्ने अवसर दिन्छ हातले बनेको। यसको प्रस्ताव बीच सिरीमिक्स, गहना, कला, स्टेशनरी, र वस्तुहरूको एक विस्तृत विविधता छन्। को सानो पसल एक जोडिएको मूल्य छ र सबै भन्दा माथि, तपाईं याद गर्नुहुनेछ तपाईंको उत्पादनहरूको गुणस्तर.
मात्र हामी के भेट्टाउन सक्छौं बिरूद्ध, खातामा लिईएको छैन कि मूल्यहरू केही बढी हुन सक्छ, हो पहुँचको कठिनाई यी उत्पादनहरू, कि हो, यो कारीगरहरू भेट्न गाह्रो छ र यसले हामीलाई ती व्यक्तिहरूलाई मेलामा किन्न व्यक्तिगत रूपमा जान बाध्य पार्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » क्रिसमस को लागी कला दिन विचारहरु
फन्टस्पार्कले तपाईंलाई त्यो आदर्श फन्ट पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जुन तपाईं आफ्नो प्रोजेक्टको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ
यो मूर्तिकला विलो रडबाट बनाइएको छ